Raw Testosterone isocaproate ntụ na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya - actorylọ ọrụ
Testosterone Isocaproate Powder bụ hormone nke mepụtara ọtụtụ n'ime testes nke ụmụ nwoke. Ọ bụ hormone ahụ nke na-enye ụmụ nwoke ụdị mmekọahụ ha. Transdermal testosterone na-eme ka aru ahụ dị ka ụbụrụ nke testosterone site na oge ntọhapụ oge. Testosterone Isocaproate ntụ ntụ na-eji aka mee ka ụbụrụ testosterone dị mma dịka hypogonadism na nkwụsị mmekọahụ na mmetụta dị oke ụkọ.
Raw Testosterone isocaproate ntụ ntụ (15262-86-9) Nkọwa
Isocaproate, ọ bụghị ụbụrụ anabolic kama ọ bụ ester nke nwere ike itinye aka na steroid n'otu ụdị ahụ dị ka onye na-ewu ewu Cypionate ma ọ bụ Enanthate esters. Dị ka Cypionate na Enanthate, Isocaproate nwekwara ike itinye aka na hormone testosterone, ma na ihe gbasara Isocaproate nke a ga-abụ nanị ebe anyị na-ahụ ya agbakwunyere. Testosterone-Isocaproate, otu ụdị ester bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịnụ; ọ bụrụ na ịchọta ya mgbe ahụ, ọ bụ karịa ka ọ ga - abụrịrị ọkachamara pụrụ iche, ọ dịghịkwa ihe kpatara ọ bụla mkpa Testosterone-Isocaproate na ụdị otu ester. Ebee ka anyị ga-achọta Isocaproate ester ọtụtụ ebe na ebe ọ na-eje ozi a nnukwu uru bụ na testosterone mixtures; kpọmkwem Omnadren na Sustanon-250. Omnadren na Sustanon-250 bụ ogige testosterone nke nwere mmiri anọ dị; anọ dị iche iche dị iche iche nke dị iche iche dị iche iche nke na-eme otu ngwongwo testosterone. Maka nzube nile siri ike, ogige abụọ a dị ka ihe yiri nke ahụ; ihe ha na-emecha dị ka otu ihe dị iche iche dị na ester, ma dịka ihe ndị ahụ, a pụrụ inweta otu uru ahụ. Ihe mejupụtara nke ọ bụla bụ dị ka ndị a:
Rao Testosterone isocaproate ntụ ntụ (15262-86-9) Smmezi
Product Name Raw Testosterone isocaproate ntụ ntụ
Chemical Aha Testosterone isocaproate;
Klaasị ọgwụ ọjọọ steroid ester
molekụla Fnhazi C25H38O3
molekụla Wasatọ 386.576 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 386.282 g / mol
Ụdị Ụdị 386.6
nchekwa -20 ° C
kwụsie ike ≥ afọ 2
Sume Chloroform, Ethyl Acetate
Antinye A na-eji 1,3-Dimethylbutylamine amụ ihe ngwa ngwa nke polymethacrylate na-adịghị arụ ọrụ dịka oge nkwụsị na chromatography mmiri mmiri na nchọpụta UV.
Kedu ihe bụ Testosterone nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ ntụ (15262-86-9)?
Otu anabolic androgenic steroid na ester ụdị testosterone; nwere ogologo ọkara ndụ karịa ụbụrụ testosterone
Testosterone isocaproate ntụ ntụ bụ ntụle ntụle nyocha nke a kọwara dị ka steroid na-etrogenic anabolic na nke a pụrụ ịchọta ọbara. Ọ bụ ester nke na-emekarị etrogen, testosterone nwere ogologo ndụ. A nwalere usoro nke nwere testosterone isocaproate maka iji hypogonadism na egbu oge mmalite. A na-eji ụbụrụ anabolic, gụnyere testosterone isocaproate ntụ ntụ, iji mee ka arụ ọrụ nke anụ ahụ na ndị na-agba ọsọ na ndị na-eme egwuregwu. A na-eche ngwaahịa a maka nyocha na ngwa nyocha.
Kedu ka Testosterone na-esi na-ekpochapu ya (15262-86-9) ọrụ
Testosterone isocaproate na ejiri abụba ma ọ bụ ester nke na-eme ka oge na-aga ịhapụ ya. Ọ na-arụsi ọrụ ike karị nke pụtara na ọ ga-anọgide n'ime ahụ maka oge dị ogologo ma ya mere iji nweta ya n'otu ugboro ma ọ bụ karịa ugboro abụọ n'izu n'izu.
Testosterone isocaproate ntụ ntụ dị ka Testosteron Caproate. O nwere ọnụ ọgụgụ nke hydrogens, carbons, oxygen na arọ ahụ dị arọ ma ndụ ya na-arụ ọrụ bụ otu ụbọchị karịa ma e jiri ya tụnyere Testosteron Caproate.
Raw Testosterone isocaproate ntụ ntụ (15262-86-9) Ụdị
Testosterone Isocaproate Powder nwere ike were n'ụdị ogwu.
Maka ndị mbido, a na-atụ aro usoro ọgwụgwọ ka ọ bụrụ 250 mg / izu nke nwere ike iwere ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu.
Maka ndị na-ewu ụlọ ọrụ ahụ, e nwere ike ịba ụba ruo 1000 mg kwa izu.
Rao Testosterone isocaproate ntụ ntụ (15262-86-9) uru
Uru nke Testosterone Isocaproate ntụ ntụ ndị nwere njikọ siri ike dị ka Omnadren na Sustanon-250 nwere ike ịkụtu n'ime ụzọ abụọ abụọ; uru ndị na-enweta site na àgwà ndị dị n'elu na ihe ụdị onyinye a na-enye ma e jiri ya tụnyere otu ụdị ester. Dị ka a tụlere na mmalite, uru nke ngwakọta testosterone bụ iji nye ụwa kachasị mma na nghọta obere ester, nke a na-enyekwa ụbụrụ na-eme ngwa ngwa na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide n'ogologo oge. Nke ahụ nwere ike ịdị mfe nghọta, ma ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ya. Mgbe ahụ, anyị nwere uru dị iche iche dabere na àgwà ndị dị n'elu, yana dịka Omnadren na Sustanon-250 na-ejikarị eme ihe maka arụmọrụ anyị na-aga elekwasị anya na uru ndị dị na ìhè ahụ.
Zụrụ Testosterone isocaproate ntụ ntụ si Buyaas.com
Raw Testosterone phenylpropionate ntụ ntụ (1255-49-8)